Dadka: "Laakiin yaa loogu talagalay?" : kanfarku wuxuu weerarayaa Jade Hallyday iyada "waddo caqli gal ah" oo kaamarada horteeda soo socota - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Dadka: "Laakiin yaa loogu talagalay?": Sawir gacmeedka Jade Hallyday ayaa loogu talagalay iyada "waddo xasilooni ah" oo ka soo horjeedda kamaradda hore
Dadka: "Laakiin yaa loogu talagalay?": Sawir gacmeedka Jade Hallyday ayaa loogu talagalay iyada "waddo xasilooni ah" oo ka soo horjeedda kamaradda hore
Jade iyo Joy Hallyday waxay ku soo laabteen Los Angeles halkaas oo gabdhaha ay korsadeen ee Johnny ay ku noqdeen dugsiga.
Muxaadaro Jade Hallyday (@jadehallyday) 24 AUG 2019 ee 7: 47 PDT
Laakiin soo kabashada kuma adkaanin Jaade walaasheeda weyn ee sida muuqata waqti badan ku qaadatay inay ku lugeyso wadooyinka magaalada. Dhawaan, gabadha curadka ah ee Laeticia Hallyday waxay la wadaagtay barteeda Instagram-ka laba talaal oo iyada ka hor ah oo gidaarka casaanka ah. "Nolol casaan", Waxay ku qortay halyeey.
Muxaadaro Jade Hallyday (@jadehallyday) 8 AUG 2019 ee 6: 48 PDT
Si kastaba ha noqotee isticmaaleyaasha internetka ma aysan aqbalin sawirada dhalinyarada. Sababta? Qaar ayaa qaba in gabadha '15' ay aad ugu badan tahay shabakadaha bulshada.
iyadu garan mayso waxa la sameeyo iyada oo muujinaya faraheeda ku jira V nullity. Way fiicnaan lahayd inay si caqli leh u yeelato duruufaha jira. Waxay u egtahay qof anshax yar oo aan gabar ahayn 15 sano.
Gabadhan aad ayey u qaawan da’deeda!
Caafimaad daro dhamaan bandhigyadan shabakadaha. Waxay u muuqataa mid aad u jilicsan oo waa gabar, kaliya caruur ah. Aad u caafimaad qab
Waxay qaadataa wado xun gabadhan, oo ay saameyn ku yeelatay hooyadeed korsatay.
waa inaad joojisaa inaad tahay moodalka ugu sareeya, laakiin yaa loogu talagalay? (...) Maanaan dhammeynin inaan aragno iyada meelwalba, iyadoo run ahaantii, iyadu runtii ma qurux badna.
Muxaadaro Jade Hallyday (@jadehallyday) 30 MAR 2019 ee 4: 48 PDT
Tani maahan markii ugu horreeysay ee Jade Hallyday lagu dhaleeceeyo dhaqankiisa kaamirooyinka bulshada. Gabadha Laeticia waxay la wadaageysaa sawirro badan barta Instagram si ay ugu farxaan macaamiisheeda 68 000.
♥ Nolosha casaan pink
Публикация от Jade Hallyday (@Jadehallyday) 7 SEN 2019 ee 7: 38 PDT
Ma raacsan tahay adeegsadayaasha? Laeticia Hallyday ma habboon tahay inay gabadheeda ka difaacdo sannadaha 15 sano ee shabakadaha bulshada? Fikradaada kula wadaag faallooyinka.
VIDEO. Læticia Hallyday inbadan oo isla eg
Way soo noqotay! Meghan Markle ayaa ka soo laabatay fasaxii umusha iyada oo ay ku socoto mashruuca loo yaqaan 'VERY on-brand project'